Kacdoonkii warshadaha – dhugasho
maxamedsheekafguun Luulyo 23, 2018 waxbarasho
Kacaankii Warshadaha Sannadadii 1700 Waxa yurub ku noolaa farsamo yaqaano badan oo dunta iyo dharka sameeya. Waqti kadib waxa la sameeyey mashiino si dhaqsa ah wax u soo saara. Mashiin-umiyeedyada horumarin ayaa lagu sameeyay. Waana bilowgii kacaanka warshadaha. Wuxuuna kacaankaasi ka bilaabamay waddanka Ingiriiska.
Sababtu waa maxay uu kacaanka warshaduhu uga billawday waddanka Ingiriiska?
In kastoo Ingiriisku ka dad tiro yaraa wadamada kale ee yurub, hadana sabobo dhowr ah ayaa keenay in kacaanka warshaduhu ka bilaabmo halkan. kacaankii beeraha, awoodda badda, dhuxusha iyo siyaasad xor ah ayaa ka mid ahaa sababahaa. Waddanka ingiriiska waxa ku noolaa beeraley fara badan. Dadka tujaarta ah ayaa iska lahaa dhul badan, halka ay beeralayda yari ay lahaayeen beero yar yar. Kacaankii beeraha ayaa keenay in tujaartu dhul farabadan helaan, beeralaydii yaryaraydna ay magaalooyinka u soo guuraan. Tani waxay keentay in beeraleydii helaan dakhli badan, waxanay isticmaaleen lacag badan oo ay ku gataan alaab. Taasi waxay keentay macaash badan iyo dhaqaale. Bilowgii 1800 Ingiriiski waxa uu ahaa dalka ugu awoodda badan adduunka xagga badda. Awoodda badda ee ingiriisku waxay sugtay safaradii ganacsi iyo gumaysi. Ganacsiga ingiriisku waxa uu u sugay boqotooyada dhaqaalaha warshadaha culus. Xaaba la,aanta ka jirtay ingiriiska ayaa keentay inuu raadiyo kulayliyayaal kale. Si fudud ayuu wuxu uga helay dhulka hoostiisa lakabka ugu soo sareeya dhuxul-dhagax. Ka dib markii baahidii loo qabay dhuxul dhagaxu badatay, waxa hoos loo sii qoday dhulka godadkii. Jawi siyaasadeed oo wanaagsan oo soo dhawaynaya fikradaha cusub ayaa ka jiray waddanka ingiriiska. Xiriirka wanaagsan ee xorriyadda hadalka ee ingiriiska ka jirtay ila 1688 dii, ayaa waxay keentay in talaabo aqooneed iyo mid fikir hore loogu qaado. Ingiriisku waxa kale oo uu lahaa dawlad deggan oo inta badan bulshadu xukumaysay iyada oo baarlamaanka soo dhex maraysa.
Arimahaas oo dhan ayaa waxay sal adag u noqdeen hal abuur tiknoolajiyadda iyo warshadaynta. Ka dib mashiinaddii waxa la iskugu keenay warshadaha, magaalooyinka waaweynina way balaadheen. Bulshadii hore ee beeralayda ahayd waxa qasab ku noqotay bulsho warshadley ah. Dadku waxay heleen alaabo cusub dad badan ayaana nolol fiican helay. Mashiinaddii waxa la dhigay warshadaha.
Furfuridda dunta iyo samaynta dharku waxa ay ahayd shaqo dumar. Qaar badan oo ka mida qoysaska beeralayda ahi waxay dakhli dheeraad ah ka heli jireen dun furfuridda iyo dhar samaynta ay guryahooda ku qaban jireen. Laakiin mashiinadan cusubi waxay u baahdeen xoog iyo muruq, ragii ayaana la wareegay shaqada inteeda badan. Warshadaha dunta waxa ka shaqaynayey boqolaal rag ah. Mashiinadu waxay miiqeen oo toleen dhar tayadiisu fiican tahay.
Warshadaha ingiriisku waxay ka gadeen dhar aduunka oo dhan. Ingiriiska ganacsigan dakhli fiican ayaa ka soo galay. Magaalo warshadeedii weyneyd ee ugu horaysay waxay ahayd Manchaster. Kacaankii warshaduhu waxa uu ka bilaabmay warshadaha dharka. Bulshada ingiriisku waa ay korodhay, dadka badankiisuna waxa uu u baahnaa dhar raqiis ah. Tani waxa ay abuurtay suuq. Badeecadaha cudbiga ingiriisku waxa ay ka soo qaadan jireen dalalka ay gumaystaan. Qalabkii hore ee ay u isticmaalayeen in dharka lagu soo saaro ma uu ahayn mid wax ku ool ah, sidaa darteed alifayaasha Ingiriisku waxay soo saareen mashiino cusub oo dharka ah oo kordhiya wax soo saarka. Soo saarka birta iyo dhuxusha Mashiinada cusub waxa laga sameeyey biraha, bulshaduna hadda waxay u baahnayd qaar badan oo nocan ah. Hadda waxa la helay si cusub oo loo dhalaaliyo biraha. Nin goob shaqo lahaa oo magiciisa la oran jiray Abraham Darby ayaa wuxu tijaabiyey dhuxul dhagax. Waxa uu ogaaday haddi uu dhuxul dhagaxda u gadiyo ama ka dhigo coke (nooc kale oo dhuxul ah) in ay dhalaalin karto birta. Helitaankan ka dib waxa si weyn u kordhay wax soo saarkii biraha. Dhuxul-dhagaxa waxa laga qodayey dhulka hoostiisa, oo mar walba sii dheeraanaysay. Biyaha kor uga soo baxayey godadka la qoday waxa lagu nuugayey tuunbooyin ku shaqaynayey mashiin-uumiyeed. Shaqada godad qodistu waxay ahayd shaqo culus oo khatar ah, laakiin waqti kadib waxa yimid mashiino ka cusub kuwii hore oo fududeeyey shaqadan.
Mishiin-uumiyeed Mashiin-uumiyeedku waxa uu ahaa hal abuurkii hore u riixayey kacaankii warshadaha. Thomas New comen ayaa dhisay mashiin-umiyeedkii ugu horeeyey sanadkii 1712, waxaanu biyaha ka soo tuurayey godadka dhuxusha. Hase yeeshee horumarka weyni waxa uu yimid sanadkii 1776 markii James Watt u uga dhisay mashiin-uumiyeed cusub god dhuxuleed dhexdii magaalada Birmingham.. Mashiinkiisani waa uu ka xoog badnaa kana wanaagsanaa kuwii hore. Waxa loo isticmaalayey kuwa dharsamaynta iyo bir soo saarkaba, waxa kale oo
loo isticmaali karayey maraakiibta iyo tareenada. Waqti cusub ayaa bilaabmayey, Isla markiibana waqtigii warshadaha ayaa bilaabmay.